Ungazicima njani ngokusisigxina iifoto zakho kwi-iPhone nakwi-iCloud | IPhone iindaba
UCarmen rodriguez | | IPhone iindaba, iCloud, iOS 8
Emva kokubonisana neengcali ezahlukeneyo, kuya kuba nzima ukwazi ukuba uUmfanekiso osusiweyo kwi-iPhone ususwe ngokupheleleyo okanye okwangoku kwifolda. Isitixo "Cima»Ayisusi rhoqo umfanekiso ngokupheleleyo okanye kwangoko. Ixelela nje i-iPhone yakho kunye neeseva zika-Apple ze-iCloud ukuba fihla le fayile ide ibhalwe ngaphezulu Olunye ulwazi.
Ingxaki kukuba nangona ungayiboni le mifanekiso kwi-iPhone yakho, Iskena esinzulu yesixhobo sakho unokuzifumana. Ngendlela efanayo Kunzima ukuxelela xa ifoto icinyiwe kwi-iCloud, kuba asazi ukuba zisebenza njani iiseva zika-Apple.
Ukuthintela oku kungaqiniseki ungafunda iinkqubo ezichanekileyo zokucima, nazi ezinye iingcebiso.
1 Cima kwi «Iifoto» hayi kwi «Albamu«
2 Cima umfanekiso kwiifoto ekwabelwana ngazo
3 Cima imifanekiso yogcino
4 Awunakwenza naluphi na ukhuphelo
5 Sebenzisa ukungqinisisa kwamanyathelo amabini.
Cima ku «Iifoto"hayi ngaphakathi"Iibhlikhi«
Ubume bemifanekiso kwiNkqubo yeefoto busekwe kuyo Iifoto yokugcina kunye noku-odola okulandelayo kwi Iibhlikhi, Ukusasazanjl. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba siyiqonde loo nto apho kufuneka siyicime ikwiZithombe.
Awuyi kuyibona inyamalala kwangoko njengoko umfanekiso osusiweyo uhlala kwi «ulawuloIsuswe kutshanje", ibekwe kwi Iibhlikhi, ngexesha Iintsuku ezingama-30 de inyamalale ngokupheleleyo, le nto ke kuya kufuneka ukuba yicime nalapho.
Cima umfanekiso kwiifoto ekwabelwana ngazo
Ukucima umfanekiso kwiifoto kushiya iifoto kwii-albhamu ekwabelwana ngazo eziqulathiweyo. Ukuba wabelane ngefoto yakho nomntu umfanekiso ugcinwe efini ukuba abahlobo okanye usapho babone. Ayithathi indawo kugcino lwakho lwe-iCloud nangona unayo Umda wemifanekiso engama-5.000 ekwabelwana ngayo, ekucelwa ukuba ucime nayiphi na into ukudibanisa ezintsha.
Ungayibona imida ye Ukusasazeka kweFoto kunye ne-iCloud Photo Sharing kwi iphepha leapile.
Cima imifanekiso yogcino
Ukuba i-iPhone yakho iyayenza backup xa usondla kwindawo eneWiFi, le kopi ibandakanya yonke imifanekiso yesixhobo, ngokufutshane, ifoto ethathwe kwinyanga ephelileyo isenokuba kugcino lwe-terminal. Ukuba kukho nayiphi na ifoto ofuna ukuyicima ngokupheleleyo kuba iya kwaphula imfihlo yakho, qhubeka uye kuyo cima i-backups ezindala.
Ukucima i-backup, landela umendo: Useto > iCloud > Ukugcina > Lawula ugcinoemva koko ukhethe isixhobo kunye nezipele ongathanda ukuzicima.
Unako kwakhona thintela iifoto ukuba zingafakwa kwiikopi ezizayo ukhuseleko, susa olu khetho.
Awunakwenza naluphi na ukhuphelo
ICloud inokuba sisibonelelo esihle, kodwa njengesixhobo sokwabelana ngefoto asiyiyo ngokuqinisekileyo iyimfuneko. Kuba khubaza ukuvumelanisa kwe-iCloud ngeefoto, yiya ku Useto > iCloud > Iifoto kwaye ususe zonke iinkonzo ezixhomekeke kwilifu.
Xa uyicima, uya kubona isilumkiso sokuba isusa iifoto zokusasaza kwi-iPhone yakho, ungakhathazeki, yile nto siyifunayo.
Sebenzisa ukungqinisisa kwamanyathelo amabini.
Ayisiyonto inzima konke konke, kulula ukuyisebenzisa kwaye Inganconyelwa ngokupheleleyo ukuba ufuna ukuba ulwazi lwakho lungangeni ezandleni zabanye abathengisi abathengisa iidola ezimbalwa kwinkampani yentengiso, okanye okubi kakhulu, ukuba ungene kwisekethe yobuqhetseba, ukukhohlisa okanye naluphi na ulwaphulo-mthetho onokucinga ngalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » iCloud » Ungazicima njani ngokusisigxina iifoto zakho kwi-iPhone nakwi-iCloud
Umhlathi wokugqibela "Sebenzisa ukungqinisisa ngamanyathelo amabini" andiqondanga, ungandicacisela nceda? Andazi ukuba ityibiliziwe ikopi / uncamathisele 🙂
Ndineefoto kwi-IPhone 5 endiyithathe kudala kwaye andifumani icon ye-trash ukuzicima, bekuya kufuneka ndenze ntoni ukuzicima?
Molweni bafana, ungandinceda?
Into endiyifunayo kukususa iifoto kwi-iPhone roll ukuzigcina kwi-iCloud kwaye ke kugcinwa ngakumbi kwi-iPhone. Ndingayenza njani? Enkosi
yabelana ngento engekhoyo sitsho
Andikwazi ukucima iifoto. Andikwazi kufumana inkunkuma kwezinye iifoto ukusuka ngo-2012. Ukwazi njani ukuzicima?
Phendula kwi shareillusion
Molo, ndifuna ukucima iifoto ezigqithiselwe kwi-iPhone kwikhompyuter yam ukuze ndibenendawo yokugcina kwifowuni. Enkosi
UJhon Jairo Jaramillo sitsho
Molo, ebusuku obuhle, nceda, ndifuna ukuba undincede kwingxaki endinayo: ndikope iifoto ukusuka kwi-iphone 5s ukuya kwi-pc yam ndisebenzisa ukhetho lokusika ukuzicima kwangoko kwiselfowuni yam, kwaye bavelisile uthotho lweefayile okanye ii-icon ezithi idiski yendawo kwaye ayindivumeli ukuba ndizicime. Ndingenza ntoni ukusombulula le ngxaki, kuba ndicinga ukuba ezi fayile zisebenzisa indawo kwisixhobo sam esiphathwayo?
Phendula Jhon Jairo Jaramillo
UJorge Luis sitsho
Ndinengxaki nge-iPhone 5 ndineefoto endifuna ukuzicima kodwa ayindinike ithuba lokuzicima, xa ndingena ngePC kwaye ndifuna ukuyicima, ayindivumeli okanye ayindivumeli ukuba ndikope ezinye iingoma
Phendula Jorge Luis
Molo, ndifuna nje ukwazi ukuba ndingazicima njani iifoto ezikhutshiweyo ukusuka kwikhompyuter yam ukuya kwi-iPhone yam, andifumani icon ukuzicima, ndingayenza njani?
Molo, ndibuyisela njani kwiifoto endizicimileyo kwiifoto ekwabelwana ngazo?
Ndibuza ukuba ndenza njani ukubuyisa iifoto
Ukuba ndicinyiwe ekusasazeni.
Ukuba kunokwenzeka ukubuyisa
Ndinengxaki nge-iPhone 5 ndineefoto endifuna ukuzicima kodwa ayindinike ithuba lokuzicima, xa ndingena ngePC kwaye ndifuna ukuzicima ayindivumeli
Yuliet Mora Garcia sitsho
Ndingathanda kwaye baya kundinceda! Ndenze ikopi yokulondoloza ngeDrayivu, ngoku ndifuna ukuyicima kwaye andinakuqhubeka kwigalari yam kwifowuni yam! Ndizicime kwiDrayivu kwaye aziveli kodwa ziyaqhubeka ukubonakala kwigalari yam, ndingenza ntoni! Ndizamile kwiifoto zikaGoogle ndiyazicima kodwa ngokufanayo ziyavela kwigalari yam kwakhona! Ndifuna uncedo nceda !!! Ozithobile
Phendula u-Yuliet Mora García
UMARIO MENDEZ GARCIA sitsho
Sele ndizamile ukucima iifoto zam efini, ilcoud kwaye akukho nto iphuma kwakhona kwi-iphon yam, iyandidika lento
Phendula uMARIO MENDEZ GARCIA
UTeresa M. sitsho
Ngaba akukho ndlela yakucima ZONKE iifoto kunye neevidiyo zokuhlaselwa, wakube uzikhuphele kwi-pc, ukukhulula indawo, kwi-Icloud uqobo nakwi-Iphone? Andikholelwa!
Phendula Teresa M
Thelekisa i-Nexus 6 vs iPhone 6, egwetyelwe ukujongana
Ngoku ungaphula i-jailbreak i-iOS 8 okanye i-iOS 8.1 ngePangu8